မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ ~ Nge Naing
Thursday, June 16, 2011 Nge Naing 97 comments
ဒီနှစ် ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့အတွက် လာရောက် ဆုတောင်းပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိစွာဖြင့် ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်တမ်းလေးအဖြစ် အမှတ်တရ သိမ်းထားပါရစေ။ သီတာဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာ ဟောတော်မူတဲ့ တရားထဲက အချက်တချက်ကို သတိရလို့ ပြန်ကောက်နှုတ်ပြီး လာဆုတောင်းပေးသူများကို စကားလက်ဆောင်လေးတခု ပြန်ပေးချင်ပါတယ်။ လူ့သက်တမ်းမှာ မွေးခါစကနေ ဆယ်နှစ်အတွင်း အသက်အရွယ်ကို အကျိုးအကြောင်း၊ အကောင်းအဆိုး ဘာမှမသိနားမလည်သေးတဲ့အရွယ်၊ ဆယ်နှစ်ကနေ အနှစ်နှစ်ဆယ်အထိကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးခြင်းနှင့် မုသားဝါဒအများဆုံးအရွယ်၊ နှစ်ဆယ်ကနေ သုံးဆယ်အထိကို ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ လှပတင့်တယ်ဆုံးအရွယ်၊ သုံးဆယ်ကနေ လေးဆယ်အထိကို ကိုယ်ကာယဗလ ခွန်အားနှင့် အပြည့်စုံဆုံးအရွယ်၊ အသက်လေးဆယ်ကနေ ငါးဆယ်အထိ အသက်အရွယ်တွေကို လူ့ဘ၀မှာ ပညဥာဏ်ရည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်းဆုံးအရွယ်၊ ၅၀ ကျော်မှာ မတက်တော့ဘဲ ၆၀ အထိ ဒီအတိုင်းပဲ သွားနေပြီး ၆၀ ကျော်လာရင်တော့ ရုပ်အဆင်း၊ ခွန်အား၊ ဥာဏ်ရည်အကုန်လုံး ပြန်ကျတဲ့အရွယ်လို့ ဟောခဲ့တာကို မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။
Human lifespan (လူ့သက်တမ်း) ကို လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်း ဒီအသက်အရွယ်ကို Middle adulthood (လူလတ်ပိုင်း) လို့ခေါ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်မှု ပြုရတဲ့ အသက်အရွယ် ဖြစ်တယ်။ လက်တွေ့အခြေအနေတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ဒီအသက်အရွယ်တွေဟာ လူ့သက်တမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ဥာဏ်ရည်အဖွံ့ဖြိုးမှု အကောင်းဆုံးအရွယ် ဖြစ်သလို လူငယ်တွေလို စိတ်ကူးယဉ်မှုပိုများပြီး လက်တွေ့ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု အားနည်းသေးတဲ့အရွယ်ကို ကျော်လွန်သွားပြီ၊ လူကြီးတွေလိုလည်း ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်လက် ညေင်းညာ၊ ကိုက်ခဲနာကျင်ပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင် မဖြစ်သေးတဲ့အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မကျဆင်းမှုကြောင့် ရောဂါအမျိုးမျိုး မ၀င်ရောက်လာနိုင်သေးတဲ့အရွယ် ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
၄၀ ကျော် အသက်အရွယ်က လောကကြီးကို အခုမှအကျိုးပြုဖို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်ဖြစ်နေတော့ လူ့ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အများဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်ရတဲ့ အသက်အရွယ်မို့ အသက်လေးဆယ်မှ လူ့ဘ၀စတယ်ဆိုတဲ့ ဒီအသက်အရွယ်ကို တင်စားတဲ့ စကားပုံ ပေါ်လာတာလို့ ကျွန်မနားလည်လိုက်ပါတယ်။ အထူးသမြင့် အမျိုးသမီးတွေအဖို့ ဒီအသက်အရွယ်ဟာ အီစရိုဂျင်ခေါ် အမျိုးသမီးဟော်မုန်း ကျဆင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်သည့်အပေါ် များသောအားဖြင့် မိခင်နို့ချိုတိုက်ရတဲ့ အရွယ် ကလေးမရှိတော့ဘဲ ကလေးတွေကြီးလာလို့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ခါစ အသက်အရွယ်လည်း ဖြစ်ပြီး ကျားသတ္တ၀ါတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေးခံရမှု (သို့) ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခံရမှု အန္တရယ် ကလည်း စတင်လျှော့ပါးလာတဲ့ အသက်အရွယ် ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ အမျိုးသားဖြစ်စေ ဒီအသက်အရွယ်ကို ရောက်လာသူတွေဟာ မိသားစု ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးက အတိုင်းအတာတခုထိ လျှော့ပါးလာတဲ့အရွယ်မို့ မိမိဝါသနာပါရာ အလုပ်တွေမှာ အချိန်ပေးဖို့ ပိုရလာတဲ့အသက်ရွယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသက်အရွယ်ဟာ ဘ၀ကျချိန်မဟုတ် ဘ၀စချိန်ဆိုတာ ဒီအသက်အရွယ်ကြောင့် ကျချိန်ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျချင်နေသူ အားလုံးကို စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် ကျွန်မဆုတောင်းကတော့ ဘာလုပ်လုပ် မိမိလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုကို အာရုံစူးစိုက်စွာနဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ၊ လာဆုတောင်းပေးသူတွေရဲ့ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေလို့ပဲ လောလောဆယ် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီပို့စ်တင်ပြီးရင် ဘုရားရှိခိုး ပန်းဆီမီး ရေချမ်းကပ်ပြီး ဓမ္မစင်္ကြာနဲ့ ပဌါန်းကို ရွတ်ဖတ်ပြီး အားလုံးအတွက် ဆက်လက် ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးသူများနှင့် ဆုတောင်းများ
(100) ပန်းပန်လျက်ဘဲ" သို့မဟုတ် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ said...
အဖျက်ဆရာ "ဒေါ်လာစား" ၊ စော်ကားလို့လာ။
(ဆရာကြီးဇော်ဂျီ ရဲ့ "ဗေဒါလမ်း" ကဗျာကို မှီးပြီး စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။)
(နံပါတ် (၁၀၀) မြောက်ဆုတောင်း ဖြစ်တဲ့ ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်စေချင်လို့ ကဗျာရှင် (သို့) တခြားတယောက်ယောက်လားတော့ မသိဘူး C-Box တွေမှာ လိုက်ကြော်ငြာထားတာ တွေ့လို့ လာဖတ်သူများ မြင်သာအောင် နံပါတ် ၁၀၀ မြောက်မွေးနေ့လက်ဆောင် ဖြစ်တဲ့ ဒီကဗျာကို အောက်က ကော်ပီကူးလာပြီး ဆုတောင်းအားလုံးရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ် ရွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ- Nge Naing 21/06/11။)
Happy birth day Nge Nge. May triple gem bless you healthy, happy and long live.
ံHi Nge Naing wishing youahappy birthday ,on June 16..
HAPPY BIRTHDAY . . . Ma Nge Naing !
Austin Thet Win
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ငယ်နိုင်ရေ..။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့လေးမှ စလို့ ရှေ့ဆက်ရမည့် ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ ကိုယ်စိတ်နှပါး ရွှင်ပြုံးစွာနဲ့ လှမ်းလျှောက်နိူင်ပါစေ အစ်မ Nge Naing ..
Oung K Nai
မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာ ကို မိသားစုနဲ့အတူ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ မငယ်နိုင် ရေ..
17 Jun 11, 01:11 AM
kiki: မွေးနေ့ မင်္ဂလာရက်မြတ်မှာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ ထပ်မံဆုတောင်းသွားပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ..စီဗုံးမှာ ပေါက်တတ်ကရ ရေးသွားသူများ အစားလည်း ရှက်မိတယ်..
Happy Birthday ပါမငယ်ရေ...
live with peace, wisdom, and success.
Happy Birthday Ma Nge :) All the best ya :)
May you be well & happy on your special day. Many happy returns
Happy Birthday Ma Nge... Many happy returns of the day...!!
Happy Birthday Ma Nge, wishing all the best for u & family!!!
Happy Birthday, Ma !! Wishing you joy & happiness always. Best wishes to you :-)
Cherry Khin Khin
Pann Chuu Chuu
Happy Birthday ! May each and every passing year bring you wisdom, peace and cheer.
Anelyn De Luna
Ronald Aung Naing
Happy birthday, Ma Nge. :)
Happy Birthday Ah Ma ! ... :)
happy birthday ma nge! hope you and your family are doing well. btw, does maung cheese like cheese? ;) i forgot to ask you and him about that when we saw each other in sydney.
Happy Birthday ma ....
မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ မငယ်ရေ။ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးကို ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ချစ်မြတ်နိုးစရာ နေရာလေးမှာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ။
ZinZin Win Ko Ko
ပျော်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မငယ်ရေ ။ သတိရလျှက်
Happy Birthday Ahma!!! May you attain Harmonious life ahead...
‎" Happy Birthday "
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင် ချစ်စွာသော မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း များစွာ ဖြင့် မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကျင်းပနိုင်ပါစေ။ Happy Birthday Sis.. All My Best Wishes!
အစ်မကြီးမငယ်နိုင်.. မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။ =)
Happy Birthday !!! sister :D may u be well and happy !!
happy birthday........nge ...
Happy Birthday!!! WIll you treat the friends with noodle?
မွေးနေ့မှသည် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးသို့ ကျနော်တို့ အရင်အတိုင်း ချီတက်ကြပါစို့
Happy birthday and wishing youagreat year up ahead! :)
Happy birthday ma nge!!
Happy birthday ma nge!
Happy birthday Ma Nge Naing!
Happy Birthday Ma Nge.
Happy Birthday Ma Nge Naing
Nan Moe Hnin Oo
Happy Birthday Ma Nge. :)
Happy Birthday Nyima..
Zaw Myo Lwin
ဒီမွေနေ့က စပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ့နဲ့ တွေ့ကြုံပါစေ
(67) Mie Nge ညီမရေ မအားတာနဲ့ ဆုတောင်းနောက်ကျနေပြီ ခုမှ အပြေးအလွှား အလုပ်မသွားခင်လေး... ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ လိုအင်များအားလုံး ပြည့်စုံပါစေ ... ယုတ်ညံ့သော အတိုက်အခိုက်များ အားလုံးလည်း ဒီထက်မက ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါစေ ....
Happy Birthday A Ma !
I regularly visit your blog from Myanmar mostly everyday by using various proxy and I support you on sharing of your experiences and thoughts. Believe, people from all works of life herein Myanmar know how bad dictatorship is leading our country down and there isaday for revolution soon which will be worsen than 1988 since people are struggling for living and not even think for others i.e. entertaining, children education, etc...
I have alsoasister and she is also living in Australia. She is almost 40 years old same as you and i wish to see you all in Australia one day.
အစ်မငယ်နိုင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
အမှန်တရားဘက်က၊ ပြည်သူတွေဘက်က အမြဲ ရပ်တည်တဲ့ ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ အဖြစ် ပြည်သူ့ရန်သူ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ပါးစေ ရုရှားက စစ်ခွေးတွေရဲ့ နှောင့်ယှက်မှုကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါစေ။
မငယ်နိင် မွေးနေ့ မှာမိသာစု
HappY BirthdaY ပါ အစ်မရေ . . .
မွေးနေ့မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
အတော် မအားလို့ အခုမှပဲ ဒီကို ရောက်တော့တယ်။
Happy Birthday to you.Haveagreat time..:)
Happy Birthday Daw Nge Naing
Happy birthday aunty Nge i miss you and the family!!
Happy BD naw unti.. ^^
Chaw Su Latt
(83) ဂရမ်မာကြာရွက် said...
အခုလို ပျော်စရာ ကိုယ်ပိုင်မွေးနေ့ လေးတွေ နောက်ထပ် ၆ဝ လောက် ကြုံရပါစေဗျာ။
June 17, 2011 2:41 AM
(84) Observer said...
Happy birthday, dear Ma Nge Naing,
June 17, 2011 4:13 AM
(85) တာရာ said..
အစ်မငယ်နိုင် အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးပါ။
အသက် ၄ဝ မှ ဘဝ စတာပါ။
အသက် ၄ဝ ကျော်မှ ပညာရော၊ ဗဟုသုတရော၊ အတွေ့အကြုံပါ ပြည့်စုံပြီး ရင့်ကျက်လာတာပါ။
အစ်မငယ်နိုင်လည်း အခုလို ပညာရော၊ ဗဟုသုတရော၊ အတွေ့အကြုံပါ ပြည့်စုံပြီး ရင့်ကျက်လာတဲ့ အသက် ၄ဝ ကျော်အရွယ်ကနေ အမေမာလို အသက် ၉ဝ ကျော်အရွယ်အထိ ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်ပြီး စာကောင်းပေကောင်းတွေ ဆက်ရေးနိုင်ဖို့ အခုလို အစ်မရဲ့ ပျော်စရာ မွေးနေ့ အခါသမယမှာ အမှတ်တရ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။
June 17, 2011 4:35 AM
(86) Anonymous said... "အပျော်ရွင်ဆုံး---အပြုံးလှလှများ"
ထာဝရပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ ။
June 17, 2011 4:46 AM
(87) ကောင်းစေလိုသူ said...
(88) မာဃ said...
မငယ်နိုင် အနေနဲ့ အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အသက်ရှည်ရှည် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြည်သူတွေကို သုတ၊ ရသ အစုံပေးနိုင်တဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြုစာပေတွေ ဆထက်ထမ်းပိုး ရေးနိုင်ပါစေ လို့ .......
(89) Min said...
(90) Anonymous said...
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = တုတ်ကြီး = mg = zaw = hanzaw = ဦးသူတော် တို.၏ ရန်မှ ကင်းဝေးပါစေ မငယ်နိုင်
(91) စစ်မုန်း said...
ကိုကျော်နိုင် နဲ့ မငယ်နိုင်တို့ တည်ငြိမ်သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝကို ရာသက်ပန် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
မငယ်နိုင် အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း မြင်တတ်လာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတဲက တစိုက်မတ်မတ် စိုက်ပျိုးလာခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး အပင်က စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးခြင်း အသီး သီးတာကို ပျော်ရွှင်စွာ ခူးဆွတ်စားသုံး ခံစားရတဲ့ ပီတိကို မဝေးတော့တဲ့ တနေ့မှာ ရနိုင်ပါစေ
(92) Rose said...
Today marks the dayarighteous person was born, withastrong heart, wise brains,adecisive mind, an unyielding spirit and dauntless actions.
Yes, today is your birthday!
May you reach your goal soon!
Nyi Lwin Happy Birthday ma nge.....
(94) Anonymous said...
Happy Birthday ပါအစ်မ။ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
SuSu Suchin Zin
(97) ပဲခူးသား said...
ကိုယ်ေ၇ာစိတ်ပါ ကျန်းမာပျော်၇ွှင်ပြီး ဘေး၇န်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေကြောင်း ဆ န္ဒ ပြု လိုက်ပါတယ်။
(98) Activist said...
ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး လိုရာတွေ ပြည့်ဝပါစေ။
ပညာမဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာ လူယုတ်မာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ အကြောက်တရားနဲ့ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ခံနေရတဲ့ တသွေးတသံတမိန့် စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်မြောက်တဲ့ နေ့ကို မကြာခင် ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ။
နှစ် ၅ဝ လုံးလုံး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လက်ပါးစေတွေက ခိုးချင်တိုင်း ခိုး၊ လုပ်ချင်သလို လုပ်လာလို့ ကမောက်ကမ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာ ဓါးမနောက်ပိတ်ခွေး ဖြစ်နေရတဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကို
အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ..... တွေ ထွန်းကားတဲ့၊ တကယ် တိုးတက်ခေတ်မီ အေးချမ်းတဲ့၊ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုသစ်ကို ပျော်ပျော်ကြီး တည်ဆောက်ခွင့် ရပါစေ။
(99) ရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ဗေဒါလမ်း ကဗျာ (video) said...
အုန်းလက်ကြွေ ရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ။
(101) ပြည်သူ said...
မွေးနေ့ဆုမွန် တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာ ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။
(102) ရဲဘော်ဘခက် said...
ဒီမိုကေ၇စီတိုက်ပွဲဝင် ၇ဲဘော်မငယ်နိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး ဒီမိုကေ၇စီတိုက်ပွဲကို အောင်မြင်သည်အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါစေလို့ ၇ဲဘော်မငယ်နိုင်၇ဲ့ မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
၇ဲဘော်မငယ်နိုင်ကို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးကြတဲ့ ဒီမိုကေ၇စီတိုက်ပွဲဝင် ၇ဲဘော်အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
၇ဲဘော်စစ်နိုင်က ၇ဲဘော်မငယ်နိုင်ကို မွေးနေ့လက်ဆောင် အမှတ်တ၇ အဖြစ် "ပန်းပန်လျက်ဘဲ"
သို့မဟုတ် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ စပ်ဆိုပြီး ၇ဲဘော်မငယ်နိုင်ကို ဂုဏ်ပြုပေးတာလဲ နှစ်ထောင်းအား၇ ဖြစ်မိပါတယ်.. ၇ဲဘော်မငယ်နိုင်
လို ချီးကျူးထိုက်၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ လူကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုတာ မင်္ဂလာတပါးပေပဲ..
(103) Blogger Support Group said...
Ma Nge Naing
You areatrue democracy activist.
We wish youalong, healthy and happy life!
May your democracy dreams come true!
မန်းကိုကို said...မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ မငယ်နိုင် ။
(105) ဆက်သစ်လူငယ် said...အစ်မငယ်နိုင်ရေ..
စစ်အုပ်စုရဲ့ ယုတ်မာရက်စက်စွာ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်မှုတွေ၊ ပြည်သူ့ငွေကို ဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ ချီဲပြီး ခိုးနေမှုတွေ၊ အုပ်ချုပ်ပုံ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဘက်ပေါင်းစုံမှာ နိမ့်ကျပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာငယ်နေရတာတွေကို သတင်းဘလော့တွေက စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ထုတ်ပေးနေတာကို အစ်မငယ်နိုင်တို့လို ကိုယ်ပိုင် ဘဝမှတ်တမ်း ဘလော့တွေကပါ အားဖြည့်ပေးနေတာ အင်မတန် လျော်ကန်ပါတယ်..
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အစ်မငယ်နိုင်တို့လို အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ရှေ့မီနောက်မီ ဘလော့ဂါတွေက ရေးမှ ဖတ်ဖူးပြီး သိမှတ်ရတာတွေက အများကြီးပါ..
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဆင်နွှဲလာတဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ပါဝင်လာတဲ့ အစ်မငယ်နိုင်လို ပြည်သူ့ဘလော့ဂါ တယောက်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ပြည်သူစစ်စစ်တွေက မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာတွေက သဘာဝကျတဲ့ မြင်ကွင်းပါ..
ဒီအထဲမှာ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးတွေ ရောပါနေတာကိုတော့ စာဖတ်သူတွေက ကျော်ပြီး ဖတ်ရတာပေါ့..
အစ်မငယ်နိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး အရာခပ်သိမ်း အဆင်ပြေပါစေ လို့ အခုလို အစ်မငယ်နိုင် ရဲ့ ပျော်စရာ မွေးနေ့သမယမှာ လေးလေးနက်နက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား..
June 18, 2011 4:09 AM
(106) Jimmy said...
May Buddha bless you always!
We all wish youavery very happy birthday!
(107) အာယု said...
မင်္ဂလာ မွေးနေ့ ရက်သတ္တပတ်လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။
မငယ်နိုင် အိမ်မှာရော၊ ဆေးရုံမှာပါ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ပါးစေတွေက မငယ်နိုင်အတွက် တောင်းပေးသွားတဲ့ ဆုတွေ မပြည့်ပါစေနဲ့။
မငယ်နိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရဲဘော်တွေက မငယ်နိုင်အတွက် တောင်းပေးသွားတဲ့ ဆုတွေ ပြည့်ဝပါစေဗျာ။
(108) Mahn Ba Khaing said...
It'sanice feeling to know that there are also Bamar who care Karens' plight.
Thanks God for having brought you to this world.
I wish you health, happiness, prosperity and success in your life.
(109) တိုက်မောင်း said...
နှစ် ၄ဝ မှသည် နှစ် ၁ဝဝ တိုင်
ပျော်စရာ မွေးနေ့လေးတွေ ဆက်လက် ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ။
(110) ဖိုးခွား said...
အန်တီရဲ့ ၄၁ နှစ် မြောက် မွေးနေ့ချိန်ခါမှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ။
အန်တီတို့ မိသားစုလည်း သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တသက်တာလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
June 18, 2011 12:28 PM
(111) Anonymous said...
အရောက်နောက်ကျသွားပေမဲ့ အမရဲ့ မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သာယာပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေးအဖြစ်နဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ပြီး အတူတကွ ချမ်းမြေ့ခိုင်မာစွာ တည်ရှိနိုင်ပါစေ။ အစစအရာရာ အောင်မြင်စွာ နဲ့ အလွယ်တကူ အခက်အခဲမရှိဘဲ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတွေအများကြီး တောင်းပေး သွားပါတယ်ရှင်။
June 18, 2011 12:38 PM
(112) Anonymous said...
May life lead you to great happiness success and hope that
I am very happy to read that all of birthday wishes and comments that I know, many peopel are loving and supporting you including me unless some of comments from Russia.
Sorry for my lately wish and long time no see because I had an exam until yesterday. Now we are school holidays I can read every new posts.
WE LOVE AND SUPPORT YOU ALWAYS.
(113) သားထူး said...
ပန်းပမာ လန်းဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစေကြောင်း
(114) Chum said...
Don't be impressed by senseless words of slaves of junta - "An old dame in her forties falling out with young chaps."
41 is not an old age. Life begins at 40. You're far from being over-the-hill. You've just reached an age of maturity through experience, and have been sharing your knowledge and experience to your readers.
May your 41st birthday bring you more adventures, more satisfaction and more success!
June 18, 2011 9:27 PM
(115) Than Naing said...
Hope you hadagreat time with your loved ones on your birthday!
(116) သမိုင်းလေ့လာသူ said...
မငယ်နိုင်ကို ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ မငယ်နိုင်ကို လေးစားတဲ့ စာဖတ်သူတွေ တောင်းပေးသွားတဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်တွေ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ ..... လို့
(117) စစ်ခွေးမုန်းသူ said...
ဟက်ပီး ဟက်ပီး ဘာ့သ်ဒေး ပါဗျာ
ကိုကျော်နိုင်နဲ့မငယ်နိုင်တို့မိသားစုလေး ပျော်၇ွှင်အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပီး မတောင့်မတမကြောင့်မကြ၇ှိတဲ့ မိသားစုဘဝကို ၇ာသက်ပန်ခံစားနိုင်ပါစေဗျာ
(ခုနက မငယ်နိုင်ကို ဟက်ပီးဘာ့သ်ဒေး လုပ်မလို့ ကွန်မန့်ကိုေ၇ာက်လာတာ အကုသိုလ်ကောင် စစ်ခွေး mg အေ၇မ၇အဖတ်မ၇ အလေဏတောေ၇းထားတာတွေကိုပြန်ပြောနေ၇င်းနဲ့ မငယ်နိုင်ကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးမလို့မေ့သွားလို့ အခုမှပြန်လာပီးဆုတောင်းပေးတာပါ)
(118) လောကပါလ said...
ဒီနှစ် ကျရောက်တဲ့ အစ်မငယ်နိုင်ရဲ့ ပျော်စရာ မွေးနေ့လေးလို နောက်ထပ် အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ထပ်ပြီး ကြုံနိုင်ပါစေ။
အစ်မငယ်နိုင် အနေနဲ့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ။
အခု အစ်မငယ်နိုင်ရဲ့ ဘလော့သက်တမ်း တနှစ်ကျော်မှာ ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီမျက်စေ့ ဖွင့်ပေးသလို အစ်မငယ်နိုင်ရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် ဘဝကို အခုလိုပဲ တန်ဖိုးရှိရှိ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဆက်လက် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
အစ်မငယ်နိုင် ယုံကြည်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှု အပြည့်အဝ ရှိတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသစ် ပေါ်ထွန်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရေး တွေကို ထင်ဟပ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
(119) Advisor said...
I'm sorry I'm late. But my good wishes are always with you.
Belated Happy Birthday, anyway!
I wish youahealthy, happy and successful life.
(120) အမှန်မြင်သူ said...
မငယ်နိုင်ရဲ့ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့အောင်မြင်မှုတွေ အမြဲ ရပါစေ၊ ပျော်စရာ ၄၁ နှစ်မွေးနေ့လိုပဲ ၁ဝဝ ပြည့်နှစ် မွေးနေ့တိုင် မင်္ဂလာမွေးနေ့တွေ နှစ်စဉ် ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မငယ်နိုင်က စစ်အုပ်စုရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု၊ မတရားဖိနှိပ်မှု၊ ရက်စက်ယုတ်မာမှု၊ ပြည်သူ့ငွေကို ဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီဲပြီး ခိုးနေလို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရး၊ ပညာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း ... ဘက်ပေါင်းစုံမှာ နိမ့်ကျနေရမှုတွေကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း ရေးသားတင်ပြနေတော့ အမှန်တရားကို ကြောက်တဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ရုရှက စစ်ခွေးတွေက မငယ်နိုင်ဘလော့ကို စာဖတ်သူတွေ လာဖတ်မှာကို စိုးရိမ်လို့ မငယ်နိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရည်မရအဖတ်မရ မဟုတ်တရုတ်တွေ ရေးလိုက်၊ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေ သုံးပြီး ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဆဲလိုက် လုပ်ပီး မငယ်နိုင်ဘလော့ကို စာဖတ်သူတွေ မလာချင်အောင် ဘလော့ဖျက်ရေးစီမံကိန်း ချပြီး လုပ်နေတာပါ။
(121) ဒေါင်းသွေး said...
မငယ်နိုင် မွေးနေ့ကို မမီလိုက်ပေမယ့် မင်္ဂလာမွေးနေ့လေး ဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ်..
မငယ်နိုင် တို့ မိသားစု အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ..
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဘုံးဘုံးလဲသည်အထိ မငယ်နိုင် ဆက်လက် ပါဝင်နိုင်ပါစေ..
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရာ လမ်းခုလတ်မှာ အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ပါးစေ အလိုတော်ရိ SLIP ရဲ့ စကားကို နားယောင်သွားပြီး SLIP ရဲ့ မာယာထောင်ချောက် ညွတ်ကွင်းထဲကို သက်ဆင်းသွားတဲ့ SV
လို အဖြစ်ဆိုးမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့..
(မငယ်နိုင်က ရင့်ကျက်တဲ့၊ ပြည့်ဝတဲ့၊ ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာတဲ့ လူစားမျိုး ဆိုတာကို သိပြီးသားပါ.. မငယ်နိုင်က SV လို အပြောင်းအလဲများတဲ့ လူစားမျိုး မဟုတ်ဘူး၊ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုး လူစားမျိုး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိပြီးသားပါ.. ဆုတောင်းရာမှာ ပြည့်စုံအောင်သာ တပါတည်း ထည့်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်တာပါ..)
(122) Tommy Thet Naing said...
အစ်မငယ်နိုင် အခုလို ပျော်စရာမွေးနေ့တွေ အများကြီး အများကြီး ထပ် ကြုံရပါစေခင်ဗျာ။
အစ်ကိုကျော်နိုင် နဲ့ အစ်မငယ်နိုင် တို့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်ဝပြီး သာယာအေးငြိမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို သေတပန်သက်တဆုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ။
အင်တာနက် မရလို့ အစ်မငယ်နိုင် ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ ပို့စ်ကို အခုမှ ဖတ်ရလို့ အခုမှ မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းရတာပါ။
(123) မောင်လူအေး said...
အန်တီငယ်နိုင် မွေးနေ့ (ဇွန်လ ၁၆ ရက်) နဲ့ အမေစု မွေးနေ့ (ဇွန်လ ၁၉ ရက်) က တထပ်ထဲနီးပါး တိုက်ဆိုင်နေတယ်.. စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အန်တီငယ်နိုင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကလဲ အမေစု စိတ်ဓါတ်လိုပဲ ပြတ်သားပါတယ်.. စစ်အုပ်စုရဲ့ ညစ်ပတ်ယုတ်မာမှုတွေကို ပိုင်းခြား ဝေဖန် သုံးသပ်ပြရာမှာလဲ အန်တီငယ်နိုင်က အမေစုလို ရှင်းလင်း ထိရောက် စေ့စပ်ပါတယ်.. အန်တီငယ်နိုင်လဲ (တခေတ်မှာ တယောက်ထွန်းတဲ့) အမေစုလို မဟုတ်ရင်တောင် အောင်မြင်သူတဦး ဖြစ်ပါစေဗျာ..
Mayco Latt im sorry aunty i cldnt send u my wish. . exam တွေရှိနေတာနဲ့ . belated happy bday. . ♥
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မှသည်။ နောင် နှစ်များစွာတိုင် ငြိမ်းချမ်းသာယာသော မိသားစုနှင့်အတူ ဘ၀ကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
ယုံကြည်ရာကို ရဲဝံ့စွာ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ပါစေ။
ကျုပ် ဖူ့တာမိက်ပါ ဖူ့ဆိုတာက ကရင်လိုခေါ်တာပါ
မငယ်နိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ဆိုလို့ လာပြီးဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
ကျန်းမာပါစေ။ ချမ်းသာပါစေ။ ကြံတိုင်းအောင်ပြီး ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါစေ။
(1) ကိုသိန်းလွင်၊ (2) အန်ကယ် နယ်လဆင်ထွန်း၊ (3) Sau Gerald, (4) ကိုကောင်းမြတ်၊ (5) ကိုအောင် ၊ (6) ကိုသောင်းဟိန်း၊ (7) ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ၊ (8) Austin Thet Win, (9) မခင်မင်းဇော်၊ (10) ကိုဗမာ့သွေး (11) Oungknai, (12) Kiki,(13) ကောင်းကင်ကို၊ (14) Mandalay Voice, (15) ကိုမင်းထဋ် (16) မသီတာ (17) ကိုအောင်ထွန်း၊ (18) ကိုနိုင်အောင်၊ (19) Noypi Yonip, (20) U Min Min, (21) မချစ်ကြည်အေး (22) အန်ကယ်ကြီး ဒန်နီဘွင့် (23) မသက်ဝေ (24) ကိုဇော်လင်း (25) ကိုလူသစ် (26) ညီမငယ်လေး လင်းလက်ကြယ်စင် (27) ညီမလေး Cherry Khin KHin (28) ညီမလေး Pan Chu Chu (29) Anelyn De Luna (30) ဥက္ကဌလေး Ronald Aung Naing, (31) မောင်လေး Henry Chen, (32) ကိုစိုးထက် (33) ကိုစိုးအောင် (34) အိအိချော၊ (35) ကို Thaw Zin, (36) ကိုမြတ်သူ၊ (37) ညီမလေး မသန္တာ၊ (38) Ko Wild, (39) ညီမလေး ဇင်ဇင်ဝင်းကို (40) ညီမ ခွန်မြလှိုင် (41) ကိုတေဇသူရ (42) မောင်လေး Thomas Latt (43) ညီမလေး ရွှန်းမီ (44) ညီမလေး Yadana Lai (45) မောင်လေး သက်တန့်ချို (46) ကိုထက်အောင်ကျော် (47) Sandar Suzan (48) ကိုအောင်မျိုးမင်း (49) ကို Yoe Chittaya (50) Turn on Ideas (51) ညီကျော် (52) ကိုသန်းကျော်ဌေး၊ (53) ရီတိုး၊ (54) ကိုမောင်မောင်သန်း၊ (55) Rose, (56) မျိုးမျိုး၊ (57) ကိုရန်နိုင်သိန်းဖေ၊ (58) Nan Moe Hnin Oo, (59) ဆရာဝင်းနိုင်ဦး၊ (60) ကိုမျိုးသန့်ဦး၊ (61) ကိုအေးလွင်၊ (62) ညီမမွန်ထက်၊ (63) မြစ်ကျိုးအင်း၊ (64) Dream Lover, (65) ကိုဇော်မျိုးလွင်၊ (66) သားငယ်၊ (67) မမီးငယ်၊ (68) Debbie, (69) ဆရာမ မေငြိမ်း၊ (70) Patrick, (71) ပြည်သူ့ဘက်သား၊ (72) ငြိမ်းနိုင်၊ (73) သျှင်နေမင်း၊ (74) ကိုဇော် (75) ကိုကျော်သူရ၊ (76) နန္ဒာအေး၊ (77) PeTi, (78) Min Min, (79) April Love, (80) Cho Aung (81) သမီးလေး ဝေနှင်းဦး၊ (82) ချောစု၊ (83) ဂရမ်မာ ကြာရွက်၊ (84) Ovserver, (85) တာရာ၊ (86) Anonymous (June 17, 2011 4:46 AM)၊ (87) ကောင်းစေလိုသူ၊ (88) မာဃ၊ (89) Min , (9၀) Anonymous (June 17, 2011 7:32 AM), (91) စစ်မုန်း၊ (92) Rose, (93) ကိုညီလွင် (94) ငမူး၊ (95) Su Su, (96) ကိုချိုတူး (97) ပဲခူးသား၊ (98) Activist, (99) ဇော်ဂျီ၏ ဗေဒါလမ်းကဗျာ (100) စစ်နိုင်၊ (101) ကိုပြည်သူ၊ (102) ရဲဘော်ဘခက်၊ (103) Blogger Support Group (104) ကိုမန်းကိုကို၊ (105) မျိုးဆက်သစ်လူငယ်၊ (106) Jimmy, (10) ကိုအာယု၊ (108) Mahn Ba Khaing (109) တိုက်မောင်း၊ (110) ဖိုးခွား၊ (111) Anonymous (June 18, 2011 6:54 PM), (112) KAUNG, (113) သားထူး၊ (114) Chum, (115) ကိုသန်းနိုင် (101) (or) သန်းနိုင် (208)၊ (116) သမိုင်းလေ့လာသူ၊ (117) စစ်ခွေးမုန်းသူ၊ (118) လောကပါလ၊ (119) Advisor (120) အမှန်မြင်သူ၊ (121) ဒေါင်းသွေး၊ (122) Tommy Thet Naing, (123) မောင်လူအေး၊ (124) သမီးဒီဇင်ဘာ၊ (125) မိုးယံ၊ (126) ဖူ့တာမိတ် တို့အားလုံးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီပို့စ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
Posted in: မှတ်တမ်း,မွေးနေ့ဆုတောင်း
June 16, 2011 at 7:22 PM Reply
June 16, 2011 at 8:53 PM Reply
ငါဘာတွေတိုးတက်လာလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်
လူ.သက်တမ်းကို ပျမ်းမျှ အသက် ၆၀ နဲ.တွက်ရင် မငယ်နိုင်က သေဖို. သိပ်မလိုတော.ပါဘူး
တစ်နေ.တစ်နေ. ဘလော.ကို ဘယ်နှယောက်လာတယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံတွေကလာတယ်၊ hit တွေ ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီ ဆိုတာတွေ ထိုင်တွက်မနေပါနဲ.
ကိုယ်.ရဲ.ကျန်တဲ.အသက်နဲ. ဘာသာရေးလိုက်စားဖို.ပဲ တွက်ပါ
စီဘောက်မှာ ကွန်းမန်.မှာသူများလာရေးတာတွေကို ပိုစ်.ပြန်တင်ပေးလိုက်
facebook က ကွန်းမန်.တွေကို ပြန်တင်လိုက်နဲ သာယာနေတဲ. ဘဝကြီးကိုစွန်.ပြီး နဲနဲပဲကျန်တော.တဲ.အချိန်လေးကို အကျိုးရှိအောင် သုံးဖို.ကျိုးစားပါဗျာ
မငယ်နိုင်တစ်ယောက် ကံဆိုးမ ဘဝကနေ အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို. မွေးနေ.မှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
June 17, 2011 at 12:03 AM Reply
June 17, 2011 at 12:20 AM Reply
June 17, 2011 at 1:19 AM Reply
June 17, 2011 at 1:58 AM Reply
Patrick, ပြည်သူ့ဘက်သား၊ ငြိမ်းနိုင်၊ သျှင်နေမင်းနဲ့ ကိုဇော်တို့ရဲ့ ဆုတောင်းတွေအတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ ဆုတောင်းပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်လွှာပို့စ်တ ပို့စ်အောက်ကို ပြန်လည် ကူးယူပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။
June 17, 2011 at 2:41 AM Reply
June 17, 2011 at 2:43 AM Reply
မိုးသွေးငယ်နဲ. ဘာညာ ဘာညာ လို. နာမည်ကြီးနေတယ်
မငယ်နိုင်က "တခု၊ တကောင်၊ တယောက်" ရေးထုံးအမှန်နဲ့ ရေးထားတာကို "တစ်ခု၊ တစ်ကောင်၊ တစ်ယောက် လို့ ပြင်ပါ" ဆိုပြီး "ဂရမ်မာညောင်ရွက်" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေးသွားသူဟာ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါဘူး၊ မငယ်နိုင်။
ကျွန်တော်က "တခု၊ တကောင်၊ တယောက်" ရေးထုံးအမှန်ကို မပစ်ပယ်သူပါ။
June 17, 2011 at 3:25 AM Reply
..... ဆိုတဲ့ စစ်ခွေးအူသံ၊ စစ်ခွေးဟောင်သံ မျိုးတွေ ကင်းဝေးတဲ့ ဘလော့လေး ဖြစ်ပါစေ လို့ ..................................
ဇော်မောင်တုတ် ဖေငယ် says:
June 17, 2011 at 3:45 AM Reply
င SV ယောကျာ်း တော်သလင်းသံ
..... မျိုးတွေ ကင်းဝေးတဲ့ ဘလော့လေး ဖြစ်ပါစေ လို့ ..................................
June 17, 2011 at 4:13 AM Reply
June 17, 2011 at 4:35 AM Reply
June 17, 2011 at 4:46 AM Reply
June 17, 2011 at 5:12 AM Reply
June 17, 2011 at 5:34 AM Reply
June 17, 2011 at 6:05 AM Reply
June 17, 2011 at 7:32 AM Reply
June 17, 2011 at 7:34 AM Reply
မငယ်နိုင်ရေ... facebook ကရော blog ကပါ ကွန်းမန်.အသစ်တွေဝင်ရင် ဝင်သလို ပိုစ်.မှာထပ်ဖြည်.ပေးပါအုံး... မငယ်နိုင်အားနေတာပဲ..
June 17, 2011 at 7:40 AM Reply
June 17, 2011 at 9:35 AM Reply
ဂရမ်မာ ကြာရွက်၊ Ovserver, တာရာ၊ ကောင်းစေလိုသူ၊ မာဃ၊ Min , Anonymous (June 17, 2011 7:32 AM), စစ်မုန်း၊ Rose, တို့ရဲ့ ဆုတောင်းတွေနဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုတွေနဲ့ ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒါပေ့မဲ့ ကျွန်မဘ၀က အတိုက်အခံ အနှောင့်အယှက် သိပ်များတယ်၊ ဒီလို အနှောင့်အယှက်တွေ ကြားကပဲ ဘ၀က တိုးတက်လာမယ်လို့ ငယ်ငယ်က ဗေဒင် လက္ခဏာတွက်ရင် အမြဲအဟောခံရတယ် ဆိုတော့ တကယ်မှန်ရင် Anonymous (June 17, 2011 7:32 AM) ပေးတဲ့ဆုကတော့ ပြည့်မယ်မထင်ဘူး။
Rose ရဲ့ ကဗျာလေးကို သိပ်ပြီးနှစ်သက်သဘောကျပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ အားလုံးကို ပို့စ်ထဲကို ကူးယူပြီး အောက်ကမှတ်စဉ်အတိုင်း အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ (83) ဂရမ်မာ ကြာရွက်၊ (84) Ovserver, (85) တာရာ၊ (86) ကောင်းစေလိုသူ၊ (87) မာဃ၊ (88) Min , (89) Anonymous (June 17, 2011 7:32 AM), (90) စစ်မုန်း၊ (91) Rose, (92)
June 17, 2011 at 9:39 AM Reply
June 17, 2011 at 9:43 AM Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငမူး၊ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ ဒီတခါတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းမို့ နာမည်တပ်ရေးလိုက်တယ်ထင်တယ်။ ငမူးအတုတွေ ပေါ်လာဦးမယ်နော့်။
June 17, 2011 at 10:35 AM Reply
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ဗေဒါလမ်း ကဗျာ (video) says:
June 17, 2011 at 11:38 AM Reply
June 17, 2011 at 11:50 AM Reply
June 17, 2011 at 12:24 PM Reply
အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ.သမျှ မကောင်းမှုတွေကြောင်. လူမုန်းခံနေရတဲ.ဘဝ ကနေ မြန်မြန်လွတ်ပါစေသာ စုတောင်းပါ
ဘုရားတရားတကယ်လုပ်ပြီး မေတ္တသုတ်အမြဲရွတ်ရင် လူတောင်မဟုတ်ဘူး တိရစ္ဆာန်တွေတောင် မေတ္တာရှိပါတယ်
မငယ်နိုင်ကျမှ ဘုရားသီချင်းတွေ တင်ပြီး ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား လက်က ကားယားကားယားလုပ်နေလို.လားမသိဘူး
ဒီဘဝအတွက်တော. စုတောင်းလည်းမှီမယ်မထင်တော.ဘူး နောက်ဘဝအတွက် စုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဘဝလို မေတ္တာတုန်း လူမုန်းများတဲ. ကံဆိုးမ ဘဝမျိုး နောက်ဘဝ မဖြစ်ပါစေနဲ.
ပဲခူးသား၊ Activist, ဇော်ဂျီ၏ ဗေဒါလမ်းကဗျာနဲ့ ဗွီဒီယိုကို ထည့်ထားပေးသူ၊ ငယ်နိုင်လမ်းကဗျာရှင်စစ်နိုင်တို့ရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့စ်အောက်မှာ အမှတ်တရအဖြစ် ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်။
Activist ရဲ့ ဆုတောင်းတွေ တကယ်ဖြစ်လာပါစေလို့ ကျွန်မလည်း နေ့တိုင်းဆုတောင်းနေတဲ့ အချက်တွေမို့ အခုလည်း တပ်ဆင့်ဆုတောင်းပါတယ်။ ပန်းပန်လျှက်ပဲကို အသံရှင် ဒေါ်ကြည်ကြည်ဌေးကိုယ်တိုင် သီဆိုပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို ကြည့်ရလို့ တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေသန်းနုကတာလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျွန်မလည်း ပန်းပန်လျှက်ပဲဆိုတဲ့ ပို့စ်တင်ဖူးတယ်။ နီနီဝင်းရွှေဆိုပြီး မျိုးသန္တာထွန်းဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ နီနီဝင်းရွှေ အဆိုကောင်းပေမဲ့ မျိုးသန္တထွန်းကတာ သိပ်ကြည့်မကောင်းဘူး။ တင်ထားတာ ဒီမှာ http://nge-naing.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html ရှိပါတယ်။
ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ကျွန်မအတွက် စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးကို တကယ်ပဲ သဘောကျပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ ကဗျာနည်းနေတာ၊ ကဗျာစပ်မတတ်တာနဲ့ အတော်ပဲ ဒီကဗျာလေးကို သီးသန့်ပို့စ်တခုအဖြစ် ပြန်တင်မယ်။ တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"အိုပါး" နဲ့ "hanzaw" လဲပါ၊ ငယ်နိုင်မ ရန်ဘေး
June 17, 2011 at 10:05 PM Reply
June 17, 2011 at 10:07 PM Reply
June 17, 2011 at 10:32 PM Reply
June 18, 2011 at 2:13 AM Reply
မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ မငယ်နိုင် ။
June 18, 2011 at 4:09 AM Reply
မိုးသွေးငယ်နဲ့ဆိုင်တာတွေ တင်ပါ တင်ပါ လို့အော်နေပြီး တင်တော.လည်း ဖျက်ပစ်တယ်နော် မငယ်နိုင်
June 18, 2011 at 6:35 AM Reply
June 18, 2011 at 8:58 AM Reply
June 18, 2011 at 9:22 AM Reply
June 18, 2011 at 9:44 AM Reply
မင်္ဂလာပါ။ နောက်ထပ် လာဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်မဆရာတယောက်အတွက် တလပြည့်ဆွမ်းကျွေးတရားနာပွဲအတွက် အလုပ်များနေလို့ အလှူအိမ်က ပြန်လာမှ နောက်ထပ်ဆုတောင်းပေးသွားသူ အားလုံးကို အကြောင်းပြန်ပါ့မယ်။
June 18, 2011 at 10:21 AM Reply
အလှူအိမ်ကပြန်လာရင် ဆွမ်းကျွေးအကြောင်း ပိုစ်.တင်ပေးပါအုံး
မငယ်နိုင်ရဲ.အတွေ.အကြုံတွေက ဗဟုသုတတွေ တရားနင်းကြီး ရလို.ပါ
June 18, 2011 at 10:58 AM Reply
အလင်းတန်း ပြောထားတာ ပါးစပ်တောင် မပိတ်သေးဘူး၊ ရုရှကကောင်တွေက သူတို့ရဲ့ အကုသိုလ်စကား တွေကို သူများ မွေးနေ့မှာတောင် မရှောင်ဘဲ လာရေးနေကြတာ အံ့ဖွယ်ပါဘဲ
ရုရှက ကောင်တွေ ...
နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့သူများ အိမ် ထောင်ရေး ပြို ကွဲအောင် လျှောက်လုပ်နေတဲ့ ကောင်တွေ၊ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို အောက်တန်းကျတဲ့နည်းနဲ့ တိုက်ခိုက် တတ်တဲ့ ကောင် တွေ၊ အဲလိုကောင်မျိုး တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်က ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်မျိုးလဲ။
မင်းတို့ ကောင်တွေ တပ်မတော် သားတွေဖြစ်ပြီး တော့အဲဒီလောက် အထိ စိတ်ဓာတ် အဆင့် အတန်း နိမ့် ကျလွန်းပါလား။
ကျုပ်ဘ၀မှာ ယောင်္ကျားဖြစ်ပြီးတော့မိန်းမလိုမိန်းမရ ပြောတတ်တဲ့ကောင်တွေကို လောက် သောက်မြင်ကပ်တာ မရှိဘူး။
June 18, 2011 at 11:03 AM Reply
June 18, 2011 at 11:13 AM Reply
June 18, 2011 at 12:04 PM Reply
June 18, 2011 at 12:28 PM Reply
June 18, 2011 at 12:38 PM Reply
June 18, 2011 at 12:57 PM Reply
June 18, 2011 at 6:54 PM Reply
June 18, 2011 at 9:27 PM Reply
June 18, 2011 at 10:04 PM Reply
June 18, 2011 at 11:25 PM Reply
၄၀ ကျော် အသက်အရွယ်က လောကကြီးကို အခုမှအကျိုးပြုဖို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်တဲ.......
အဲ.လို အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်တဲ.အရွယ်ရောက်မှ အကူညီလိုအပ်နေတဲ. ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနားမှာမရှိပဲ နိုင်ငံခြားသားတွေနားမှာ ရှိနေတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာ
မငယ်နိုင်ရဲ. အကောင်းဆုံးအရွယ်က ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော. ဘာမှ အသုံးမကျပါဘူး။
June 19, 2011 at 1:43 AM Reply
နောက်ထပ်လာဆုတောင်းပေးသွားကြတဲ့ (100) ကိုပြည်သူ၊ (101) ရဲဘော်ဘခက်၊ (102) Blogger Support Group (103) ကိုမန်းကိုကို၊ (104) မျိုးဆက်သစ်လူငယ်၊ (105) Jimmy, (106) ကိုအာယု၊ (107) Mahn Ba Khaing (108) တိုက်မောင်း၊ (109) ဖိုးခွား၊ (110) Anonymous (June 18, 2011 6:54 PM), (111) KAUNG, (112) သားထူး၊ (113) Chum တို့အားလုံကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မွေးနေ့တနေ့တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်ပြီးလျှောက်ရမည့် ဘ၀လမ်းခရီးအတွက်ပါ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ တခြားသူတွေကိုတော့ ၀မ်းသာကြောင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကလွဲပြီး အထွေအထူး ပြောစရာမရှိပေမဲ့ ကိုပြည်သူ၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်၊ Blogger Support group,မျိုးဆက်သစ်လူငယ်နဲ့ Mahn Ba Khaing ကိုအတွက် Message တချို့ပေးစရာ ရှိပါတယ်။
- ကိုပြည်သူ တခါမေးတဲ့ သံသရာတပတ် ပြန်လည်လာတဲ့ ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်းပို့စ်ကို http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html မှာ တင်ထားပြီးပါပြီ။ Sidebar က Popular posts အောက်မှာ ထောက်ကြည့်လည်း ရပါတယ်။
-Blogger Support Group ပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်မက အခုချိန်မှာ "You areatrue democracy activist." မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခုချိန်မှာ ကျွန်မလည်း တခြားသူတွေနည်းတူ Supporter တဦးသာသာပဲ နိုင်တာနဲ့ ပံ့ပိုးနေသူ တဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
- မျိုးဆက်သစ်လူငယ် (((လူငယ်တွေအနေနဲ့ အစ်မငယ်နိုင်တို့လို အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ရှေ့မီနောက်မီ ဘလော့ဂါတွေက ရေးမှ ဖတ်ဖူးပြီး သိမှတ်ရတာတွေက အများကြီးပါ..))) အဲဒီအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း 8888 အရေးတော်ပုံသာ မဖြစ်ခဲ့ရင် အာဏာရှင်တွေ ၀ါဒဖြန့်တာကို အကုန်ယုံပြီး ဘာမှ သိမှာမဟုတ်ဘဲ အာဏာရှင် လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ မိမိထက်အရင်လူတွေက လက်ဆက်ကမ်းလာလို့ အာဏာရှင် ဖုံးထားတဲ့ သမိုင်းအမှန်ကို သိရတာဟာ တကယ်ကို ၀မ်းသာဖို့ကောင်းသလို အခုထိ အမှောင်ဖုံးခံနေရသူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတော အမှန်ပဲ။
- Mahn Ba Khaing - တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တာချင်း တူပေမဲ့ ဗမာအများစုက ဒီမိုကရေစီအရေးကိုပဲ ပိုအားသန်ပြီး တခြားတိုင်းရင်းသားအများစုကလည်း လူမျိုးစုအရေးကိုပဲ ပိုအားသန်ကြတာကို တွေ့ရတော့ အဲဒီအရေး နှစ်ခုမှာ တခုတည်း ပြေလည်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူး နှစ်ခုစလုံး ပြေလည်မှသာ အေးချမ်းမယ်ဆိုတာ သိလို့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ လူမျိုးစုအရေးနှစ်ခုစလုံးက တန်းတူရည်တူ အရေးကြီးပြီး တန်းတူရည်တူ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ဗမာနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး သတိထားမိပါစေလို့ ကျွန်မ အမြဲဆုတောင်းပါတယ်။
June 19, 2011 at 5:37 AM Reply
(June 19, 2011 1:43 AM)
(( Mahn Ba Khaing - တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တာချင်း တူပေမဲ့ ဗမာအများစုက ဒီမိုကရေစီအရေးကိုပဲ ပိုအားသန်ပြီး တခြားတိုင်းရင်းသားအများစုကလည်း လူမျိုးစုအရေးကိုပဲ ပိုအားသန်ကြတာကို တွေ့ရတော့ အဲဒီအရေး နှစ်ခုမှာ တခုတည်း ပြေလည်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူး နှစ်ခုစလုံး ပြေလည်မှသာ အေးချမ်းမယ်ဆိုတာ သိလို့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ လူမျိုးစုအရေးနှစ်ခုစလုံးက တန်းတူရည်တူ အရေးကြီးပြီး တန်းတူရည်တူ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ဗမာနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး သတိထားမိပါစေလို့ ကျွန်မ အမြဲဆုတောင်းပါတယ်။ ))
Yes, you're right. I agree with you.
Ethnic minorities should be much more attentive to the issues in connection with democracy and human rights in Burma, while Bamar should express much greater concern for the plight of ethnic minorities.
Unfortunately, the majority on both sides do not have the right attitude.
We still need to goalong way before we can foundatruly united front against the despot.
June 19, 2011 at 7:50 AM Reply
မိသားစုတာဝန်တွေနဲ့၊ ကျောင်းတဖက်၊ အလုပ်တဖက်နဲ့ မို့လို့ activist စစ်စစ် မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုပေမယ့် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးတွေကို ကြုံရင်ကြုံသလို ရေးပြီး အာဏာရှင်က ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ သမိုင်းမှန်တွေကို မသိသေးတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဝေမျှပေးပြီး အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ကိုယ် လုပ်နိုင်တာနဲ့ ပံ့ပိုးပေး နေတာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ..
အင်တာနက် သုံးနိုင်တဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတိုင်းက မငယ်နိုင် လုပ်တာရဲ့ တဝက်လောက်ကို ကိုယ်စီကိုယ်င လုပ်ကြမယ် ဆိုရင် သမိုင်းမှန် အချက်အလက်တွေက မသိသေးတဲ့ ပြည်သူတွေကြားကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်လာနိုင်ပါတယ်..
ကိုယ်တိုင် စာမရေးတတ်သူတွေ အနေနဲ့လဲ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးကောင်းတွေ၊ သတင်းထူးတွေကို ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးတာကို အခု လုပ်နေကြတာထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် သဘောထားပြီး တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်..
June 19, 2011 at 9:16 AM Reply
(101) က ကိုသန်းနိုင်လား (208) က သန်းနိုင်လားမသိဘူး အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ရေးထားတော့ လေယူလေသိမ်းကို ခန့်မှန်းလို့ မရဘူး။ ဘယ်သန်းနိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေတွေထဲက ထူးထူးခြားခြား ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တာ ၀မ်းသာပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အိမ်မှာက ကျေးဇူးးရှင် နှစ်ယောက်ရှိတော့ Your love one ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုဆိုလိုလဲ မသိဘူး။
ကျေးဇူးရှင်အသေးလေးက ကျောင်းကပြန်ရင် ဘာမှမလုပ်ခင် အမေရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်ပြီး ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲက စာအုပ်တွေ တအုပ်ပြီးတအုပ်ဆွဲထုတ်ပြပြီး ဒီနေ့ဘာတွေသင်ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြတတ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းရောက်ပြီးဆိုတော့ အဲဒီနေ့က ကျောင်းကအတွေ့အကြုံတွေ ပြောလို့ ပြီးသွားလည်း အမေနားကတော်တော်နဲ့ မခွာပဲ ထိုင်နေတယ်။ သူတို့သားအဖက တယောက်ကိုတယောက် အမြဲလိုက်စတတ်တယ်။ အဲဒီနေ့ကလည်း သူ့အဖေက "ဟေ့ကောင် မင်းက ငါ့ Girl friend ရင်ခွင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ဒီလိုပဲ ၀င်ဝင်ထိုင်နေတာ တရားလွန်နေပြီနော့် မင်း Girl friend ရှိလာတဲ့နေ့ကျရင် မင်း girl friend ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါလည်း အဲလိုပဲ ၀င်ထိုင်မယ်" လို့ လိုက်စတော့ သားက ဖေဖေဘာတွေ ပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးလို့ ရှက်လွန်းလို့ မျက်နှာနီမြန်းပြီး ရှက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့အဖေကတော့ တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ရယ်ပြီး တော်တော်လေး ပျော်နေတယ်။ ကျွန်မကတော့ သားရှက်နေတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး သဘောကျပေမဲ့ မေမေလည်း ဖေဖေနဲ့ အလိုတူအလိုပါဆိုပြီး စိတ်ကွက်သွားမှာစိုးလို့ ရီမရဲဘူး။ ကျွန်မက ဒီကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်မှာ အကြီးတယောက် စိတ်ကွက်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ အငယ်တယောက် စိတ်ကွက်တာကိုတော့ လုံးဝခံနိုင်ရည် မရှိတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ငြင်းရင် သားဘက်ကပဲ ပါရသလို ကျွန်မနဲ့ သူ့အဖေ ငြင်းရင်လည်း သားက ကျွန်မဘက်ကပဲ ပါတတ်တော့ ကျေးဇူးရှင်အကြီးကို အငယ်လောက် မျက်နှာအသာပေးမနိုင်ပေမဲ့ သူ့ကို ပိုသနားတာတော့အမှန်ပဲ။
June 19, 2011 at 9:19 AM Reply
(( အခုထိ အမှောင်ဖုံးခံနေရသူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတာ အမှန်ပဲ။ )) လို့ အစ်မငယ်နိုင် ပြောတာ အမှန်ပါ..
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ပြည်သူတွေကို ထာဝရ စစ်ကျွန်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ကို အမှောင်ဖုံးအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်လာခဲ့တာပါ..
နိုင်ငံရေး လိုက်စားတဲ့ ပြည်တွင်းက လူတွေအနေနဲ့ အင်တာနက် သုံးနိုင်တာတောင် နိုင်ငံရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ နိုင်ငံရေးဘလော့တွေကို ဟိုကျော်၊ ဒီခွပြီးမှ ကြည့်လို့ရတာ ဆိုတော့ အခက်အခဲ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တော်တော်လေး ကြိုးစားပမ်းစား ဖတ်နိုင်မှ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေး အကြောင်းအရာတွေရဲ့ ၂၅% လောက်ကိုဖတ်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားသူတွေ အတွက်ကတော့ ဘယ်လောက်အထိ အမှောင်ဖုံးနေမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်..
နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ အနေနဲ့ Blogger Support Group ပြောသလို (( အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးကောင်းတွေ၊ သတင်းထူးတွေကို ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးတာကို အခု လုပ်နေကြတာထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် သဘောထားပြီး တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ လုပ် )) ပေးနိုင်မှ စစ်အုပ်စုက တမင် အမှောင်ချထားလို့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိကို တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
June 19, 2011 at 9:51 AM Reply
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေက ကိုယ်နိုင်ဖို.အတွက်ဆိုရင် ဆရာဇော်ဂျီရဲ. ကဗျာတောင် ဖျက်လို.ဖျက်ဆီးလုပ်ကြသူတွေပဲ
မငယ်နိုင်ကြီးကလည်း မကြီးမငယ်နဲ. ကျေနပ်ပြီး မတားတဲ.အပြင် ပို.စိတောင်ပြန်တင်မယ်တဲ.
ကျန်တဲ.သူတွေကလည်း အမြင်မတော်ရင် နဲနဲပါးပါးပြောကြပါအုံး
ရင်းနီးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို. Anonymous နဲ.ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်
တလေးတစားနဲ. အမြဲလာပြီးဖတ်ရှုနေသူတစ်ယောက် လျှော.သွားတယ်လို.ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ
မငယ်နိုင်ရဲ. ၆၆ နှစ်မွေးနေ.နောက်ပိုင်းမှာ လေးစားသူတွေ ထပ်မလျှော.သွားပါစေနဲ.လို. စုတောင်းပေးပါတယ်
June 19, 2011 at 8:04 PM Reply
Anonymous (June 19, 2011 10:59 AM)
နဲ့ေ၇းသွားတဲ့ mg သို့..........
ေ၇းတဲ့ပို့စ်တိုင်းကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ယုတ်ယုတ်၇ိုင်း၇ိုင်းတွေေ၇းပီး နှောင့်ယှက်နေတာကို ကဗျာဆ၇ာကထည့်စပ်ထားတာကွ
ဘာလဲ ... မင်းတို့၇ဲ့အဖျက်လုပ်၇ပ်တွေက ကဗျာတိုတိုလေးထဲမှာ ပေါ်လွင်နေလို့
အဖျက်သမားစာ၇င်းထဲက mg ၊ zaw ၊ hanzaw
ဦးသူတော်၊ တုတ်ကြီး၊ ...... နာမည်တွေနဲ့မေ၇းဘဲ Anonymous နဲ့ လာေ၇းတာလားကွ
June 19, 2011 at 8:28 PM Reply
ဆ၇ာဇော်ဂျီ၇ဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာကို ကိုစစ်နိုင် ပြန်စပ်ထားတဲ့ ငယ်နိုင်လမ်း ကဗျာတိုတိုလေးထဲမှာ ၇ု၇ှကစစ်ခွေးတွေ၇ဲ့အဖျက်လုပ်၇ပ်တွေက ပေါ်လွင်ပါတယ်
မငယ်နိုင်ဘလော့မှာ ၇ု၇ှကစစ်ခွေးတွေက ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသဘောနဲ့ အလေဏတောယုတ်ယုတ်၇ိုင်း၇ိုင်းတွေေ၇းပီး နှောင့်ယှက်နေတာတွေကို ဒီကဗျာဖတ်လိုက်တဲ့ ၁ မိနစ်အတွင်းမှာ မြင်ယောင်လာစေပါတယ်
ဒီ ၇ု၇ှက မိမဆုံးမဖမဆုံးမ၊ ဆန်ကုန်မြေလေးကောင်တွေကို နာနာလေးသာဆုံးမပေးပါဗျာ
June 19, 2011 at 9:16 PM Reply
June 19, 2011 at 11:12 PM Reply
June 20, 2011 at 12:26 AM Reply
June 20, 2011 at 1:59 AM Reply
လမင်းကြီးကို ခွေးဟောင်လို့ လမင်းကြီးရဲ့ အရောင်အဝါက မညိုးနွမ်းပါဘူး။
ရုရှက စစ်ခွေးတွေဟောင်လို့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရုရှက စစ်ခွေးတွေ ဟောင်လေလေ၊ မငယ်နိုင်ဘလော့ကို စာဖတ်သူတွေ ပိုလာလေလေ ဆိုတာကို ကောင်တာက သက်သေပြနေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုစစ်ခွေးမုန်းသူရေ အဖျက်သမားစာ၇င်းထဲက mg ၊ zaw ၊ hanzaw
ဦးသူတော်၊ တုတ်ကြီး၊ ...... နာမည်တွေနဲ့မေ၇းဘဲ Anonymous အပြင် ငယ်နိုင်.ယောက်ျား လည်း ပါပါတယ်
ဒီမို ကျော်ကျော် says:
June 21, 2011 at 12:14 PM Reply
ဆရာဇော်ဂျီရဲ. ကဗျာကို ဖျက်တာကိုတော. မှန်တယ်လို.မထင်ပါ
June 21, 2011 at 7:12 PM Reply
(((( ဆရာဇော်ဂျီရဲ. ကဗျာကို ဖျက်တာကိုတော. မှန်တယ်လို.မထင်ပါ ))))
ဆိုပြီး (( ဒီမို ကျော်ကျော် )) က ရေးသွားပါလား..
(( mg ၊ zaw ၊ hanzaw
ဦးသူတော်၊ မှော်ဆရာ၊ တုတ်ကြီး၊ ငယ်နိုင်.ယောက်ျား၊ SV ယောက်ျား၊ ...... )) ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ အပါအဝင် နာမည်မျိုးစုံ သုံးပြီး ဒီမိုကရေစီထောက်ခံသူ ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင် နဲ့ ပြည်သူတွေကို နှောင့်ယှက်ပုတ်ခတ်စော်ကားဆဲဆိုနေတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ mg က ((ဒီမို ကျော်ကျော်)) ဆိုပြီး ((ဒီမိုကရေစီ)) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပုံမှားရိုက်ပြီး ရေးသွားပါလား..
တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့၊ သမိုင်းမှန်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ပြည်ဖျက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို မျက်စေ့မှိတ် ထောက်ခံပြီး အမှန်တရားကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့၊ ဘလော့ဖျက်နေတဲ့ ((ဒီမို ကျော်ကျော်)) က စစ်ခွေးတွေရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ အဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို မြင်သာအောင် ကဗျာထဲ ထည့်စပ်ပေးတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်သား ကဗျာစပ်သူကို (((( ကဗျာဖျက်သလေး )))) ၊ ဘာလေးနဲ့ ဗြောင်းဗြန်တွေ ပြောနေပါလား..
((ဒီမို ကျော်ကျော်)) ပါးစပ်က နတ်စကား ထွက်နေပါလား..
Tommy Thet Naing says:
June 21, 2011 at 9:19 PM Reply
"((ဒီမို ကျော်ကျော်)) ပါးစပ်က နတ်စကား ထွက်နေပါလား.." လို့ ရေးထားတာက "ခွေးပါးစပ်က နတ်စကား ထွက်နေပါလား.."
လို့ ဒီမို ကျော်ကျော် ဆိုတဲ့ ရုရှကကောင်ကို စောင်းပြောတာလားဟင် ?
June 21, 2011 at 9:20 PM Reply
June 21, 2011 at 10:46 PM Reply
မင်းသိမ်ခ၏ တပည့်ရင်း says:
June 22, 2011 at 12:15 AM Reply
မွေးနေ့ ၃ ရက်ကွာတဲ့လူခြင်း တူဖို့ဆိုတာ လုံးဝ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ
တစ်ရက်တည်း မွေးတဲ့လူခြင်းတောင် လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေတာတွေ ရှိပါတယ်
June 23, 2011 at 1:18 PM Reply
မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်မ တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး လာဆုတောင်းပေးသွားသူတွေအတွက် အခုမှ ပြန်အကြောင်းပြန်ဖြစ်တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသလို မွေးနေ့ကတော့ မွေးနေ့ပါပဲ ဒါပေမဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာ မွေးနေ့မှ လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ ကုသိုလ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်အောင် ကျွန်မ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆုတောင်းပေးသူများရဲ့ ဆုတောင်းတွေက နေ့တိုင်းအတွက် အကျုံးဝင်နေလို့ နောက်ကျတယ် စောတယ် ဆိုတာ သတ်မှတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အားလုံးရဲ့ ပေးပို့သော မေတ္တာစေတနာတွေကြောင့် ဆုတောင်ပေးသူများရဲ့ ဆုတောင်းတွေ ပြည့်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုစစ်နိုင်ရန် ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကို ဖျက်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ပြောလိုတာက အဲဒါ ဖျက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ပွားတာသာ ဖြစ်တယ်။ မူရင်း အနုပညာတခုကို ဖျက်ဆီးလို့လည်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူစပ်ဆိုထားတဲ့ အောက်မှာ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကို မှီပြီးစပ်ဆိုထားတယ်လို့ ရည်ညွန်းချက်ကို ရေးထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ Reference ပေးထားပြီးသား ဖြစ်လို့ ကိုစစ်နိုင်က ဆရာဇော်ဂျီကဗျာကို ခိုးတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဖျက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာ Reference မှ မပေးဘဲ ဘုရားဟောတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာ ပွားလို့ရထားတဲ့ တရားလိုလို၊ တခြားစာအုပ်တွေထဲက သူများပြောထားတဲ့ အဆိုမိန့်တို့ အင်္ဂလိပ်စာတို့ကိုလည်း တိုက်ရိုက်ပုံတူ ကူးချပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ရေးထားတဲ့စာလိုလို ဘာ Reference မှ မပေးဘဲ ဘလော့ဂ်မှာ တင်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးလူတွေမှ သူများစာကို ကိုယ့်စာလုပ်ပြီး ဖျက်ဆီးတာ ခိုးချတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အမျိုးအစားတွေ ထဲမှာ ကိုစစ်နိုင်စပ်ထားတဲ့ ကဗျာမပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ကျွန်မ ပို့စ်တခု သီးသန့်အဖြစ် ပြန်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
မင်းသိက္ခတပည့်ရင်း နာမည်နဲ့ လာရေးသူ - ကျွန်မကို ရှင်တို့ပဲ အထင်ကြီးနေတာ ကျွန်မ ဘာမှမဟုတ်လို့ လာဆုတောင်ပေးတဲ့သူတွေက ကျွန်မကို ဖါးလည်း သူတို့အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိပါဘူး။ ဆုတောင်းပေးသူတွေနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း အပြင်မှာ သိကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ လာဆုတောင်းပေးတာက သူတို့ရဲ့ မေတ္တာ စေတနာ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မနာလိုဖြစ်ပြီး အကုသိုလ် လာပွားနေလို့ကတော့ ဘယ်သူမှ လက်မခံတဲ့အတွက် အဲဒီအကုသိုလ်က လာပွားသူဆီကိုပဲ ပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်။ ရှင်တို့ အားပေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို လူလာစေချင်ရင် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်ခိုင်းပါ။ သူများအတင်းတွေပဲ ရေးမနေဖို့ အကြံပြုပါ။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ အကုသိုလ် လာမပွားပါနဲ့ အကျိုးမထူးပါဘူးလို့ အကုသိုလ်လာပွားနေသူ အားလုံးကို အသိပေးပါတယ်။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်) says:
June 25, 2011 at 11:44 PM Reply
နာမည်နဲ့ ပုံမှားရိုက်ပြီး ရေးသွားတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ နောက်မြီးဆွဲရေ .....
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်)ကို နားထောင်လိုက်ဦး။
"ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ တပည့်ရင်း" လို့ လိမ်ရေးထားပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ မိန့်ခွန်းကို မကြားဖူးပဲ မဖြစ်ရအောင်လို့။
ကွယ်လွန်သူ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာ၊ ဗေဒင်၊ လက္ခဏာပညာရှင် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့(၈၈) အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ တစ်ခုက အသံဖိုင်ပါ။ အားလုံးနားဆင်နိုင်အောင် ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆရာကြီးရဲ့ ဇဝနဥာဏ်နဲ့ ရဲရဲတောက် ဟောပြောချက်တွေကို နားထောင်ကြည့်ကြပါဦး.....။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ တစ်ခုက အသံဖိုင် says:
June 25, 2011 at 11:53 PM Reply
"မင်းသိမ်ခ၏ တပည့်ရင်း" လို့ လိမ်ရေးထားပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ တစ်ခုက အသံဖိုင် ကို မကြားဖူးပဲ မဖြစ်ရအောင်လို့ နားထောင်လိုက်ဦး။
"မင်းသိမ်ခ၏ တပည့်ရင်း" လို့ လိမ်ရေးထားပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်) ကို မကြားဖူးပဲ မဖြစ်ရအောင်လို့ နားထောင်လိုက်ဦး။
June 26, 2011 at 12:00 AM Reply
စစ်အုပ်စုရဲ့ နောက်မြီးဆွဲရေ .....
၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်) says:
June 26, 2011 at 12:01 AM Reply
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း လူထုဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်)
June 26, 2011 at 12:06 AM Reply
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ အသံဖိုင် (လင့် နှစ်ခု) says:
June 26, 2011 at 10:22 AM Reply
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ အသံဖိုင် ကို ဒီမိုဝေယံဘလော့က
လင့် မှာ ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။
အဲဒီ ဒီမိုဝေယံဘလော့က လင့်မှာ ခဏစောင့်လို့ မပေါ်ရင်
လင့် မှာ နားထောင်နိုင်ပါတယ်...
July 3, 2011 at 2:31 AM Reply
July 3, 2011 at 10:14 AM Reply
မွေးန့လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပမဲ့ ကျွန်မအတွက် နေ့တိုင်းကို မွေးနေ့လိုပဲ မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ပဲ ဖြတ်သွားလေ့ ရှိတော့ ဖူ့တာမိုက်ရဲ့ မွေးန့ဆုတောင်းကလည်း နေ့တိုင်းအတွက် အကျုံးဝင်နေမှာဖြစ်တယ်။ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပို့စ်ကို C-Box တွေမှာ Link လိုက်ထည့်ပေးတာတော့ ကျွန်မ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်မပို့စ်တွေကို ဖတ်စေချင်သူတွေက လိုက်ကြော်ငြာပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုဒီပို့ကိုတော့ ဆရာဇောဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို တုပြီး မှတ်ချက်ထဲမှာ ကျွန်မကို ဂုဏ်ပြု စပ်ပေးထားတဲ့ ကဗျာကို ဖတ်စေချင်လို့ စာလာဖတ်သူတွေထဲကပဲ C-Box တွေမှာ လိုက်ထည့်ပေးထားတာကို တွေ့တယ်။
ဖူ့တာမိုက် ဘလော့ဂ်ကို ကျွန်မ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း သုတ်သုတ်သွား သုတ်သုတ်ပြန်ဆိုတော့ ဘယ်မှာမှ သိပ် နှုတ်မဆက်ဖြစ်ဘူး။ C-Box တွေမှာ ကျွန်မကို စေတနာနဲ့ ပို့စ်ကြော်ငြာပေးသူတွေ ရှိသလို ကျွန်မနာမည်နဲ့ ပေါက်ကရလျှောက်ရေးနေသူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ် Link တွေ့တိုင်းလည်း ကျွန်မ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားချင်ပါတယ်။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
C-Box မှ ဘလော့ဂါ ကိုးဒီသွေး၏ ဆုတောင်း မှတ်ချက် says:
July 11, 2011 at 4:16 AM Reply
C-Box မှ ဘလော့ဂါ ကိုးဒီသွေး၏ ဆုတောင်း မှတ်ချက်
11 Jul 11, 01:45 AM
ကိုးဒီသွေး: ငယ်နိုင်ရေ ... ရောက်လာပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာ စိတ်အားထက်သန်မှု အတိုင်းအဆများစွာ ရှိနေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်
11 Jul 11, 01:46 AM
ကိုးဒီသွေး: တို့တွေ လက်တွဲပြီး အတူတကွ ချီတက်ကြစို့လား။
11 Jul 11, 01:49 AM
ကိုးဒီသွေး: အစွမ်းအစရှိသမျှ အားထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ မငယ်နိုင်အနေနဲ့ မိသားစုတစ်စုလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း သုခပေါင်းစုံနဲ့ အစဉ်ခညောင်းနိုင်ပါစေလို့ .။
11 Jul 11, 01:53 AM
ကိုးဒီသွေး: တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ တည်ဆောက်ယူတဲ့နေရာမှာ မကျယ်ပြန့်တဲ့ ကိုးဒီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့နဲ့ အဓိကရန်သူက ဘယ်သူလဲဆိုတာ တို့တွေ နားလည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား
11 Jul 11, 01:55 AM
ကိုးဒီသွေး: အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို အပြန်အလှန် ၀င်ထွက်ရင်းနဲ့ တို့တွေ လုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ကြစို့လား မငယ်နိုင်
July 11, 2011 at 4:25 AM Reply
စစ်အာဏာရှင်ကို အစွမ်းအစရှိသမျှ အားထုတ်ပြီး တွန်းလှန်တဲ့
cho cho win says:
June 17, 2012 at 5:39 PM Reply
ကိုယ် စိတ် နှစ် ဖြာ ကျန်း မာ ပါ စေ ။
June 20, 2012 at 6:20 AM Reply
၄၁ နှစ်ဆိုတာ မငယ်တော့ဘူး
Anonymous (June 20, 2012 6:20 AM)
အစကတဲက (၁၉၈၈ မတိုင်ခင်ကတဲက) အမြင်မှန်နေပြီးသား မငယ်နိုင်ကို အမြင်မှန်ရသင့်ပါပြီလို့ မင်းက လာပြောနေတာ ဟာသ ဖြစ်နေတယ်ကွ
အမြင်မှန်ရသင့်ပြီလို့ ပြောရမှာက အသက် ၇၀ ကျော် သန်းရွှေနဲ့ အောင်သောင်း ပဲကွ
ဒီပဲရင်းလူသတ်ပွဲနဲ့ ပြည်သူ ၁၀ဝ ကျော်ကို အသားလွတ် ရိုက်သတ်ခိုင်းရတာ မကျေနပ်သေးဘဲ
တောင်ကုတ်လူသတ်ပွဲ လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်မယူဘဲ တမင် လွှတ်ပေးထားတဲ့ အသက် ၇၀ ကျော် သန်းရွှေနဲ့ အောင်သောင်း ကို အမြင်မှန်ရဖို့ သွားပြောကွ
ပြည်သူတွေ မျက်ဖြူစိုက်လေ၊ စစ်တပ်က ကြိုက်လေ အပေါက်မျိုး ချိုးပြီး စစ်တပ်ကို ပြည်သူတွေက အားကိုးတကြီးနဲ့ ကယ်တင်ရှင်လို့ မြင်လာအောင်
ပြည်သူ့အသက်တွေကို စတေးပြီး စစ်တပ်ရဲ့ ဂုဏ်ကို မမှန်ကန်တဲ့ နည်းနဲ့ တည်ဆောက်ယူပြီး စစ်တပ်က အာဏာပြန်သိမ်းဖို့ လမ်းခင်းနေတဲ့
အသက် ၇၀ ကျော် သန်းရွှေနဲ့ အောင်သောင်း ကို အမြင်မှန်ရဖို့ သွားပြောကွ
June 30, 2012 at 12:26 PM Reply